Key ကိုတိပ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck, သံမဏိ Keytape လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ဝေငှ Spanner တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. Chuck, Precision Key ကိုတိပ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Drilling
Home > ထုတ်ကုန်များ > Chuck System ကိုတူးသံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
သံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Key ကိုတိပ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck, သံမဏိ Keytape လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Spanner လေ့ကျင့်ခန်း Chuck R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသော့ချက် type ကိုသံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
High Quality 3/8 '' '- 24UNF စွန်ခံသံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
High Quality JT1 သံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
highquality key ကိုရိုက်ထည့် stainlesssteel လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာသံမဏိ B10 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
သံမဏိ Chuck B10 6mm Drilling
လေ့ကျင့်ခန်း Chuck တင်းကျပ် 10 မီလီမီတာ 13mm Keyless လက်
သံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck မြင့်မားသောတိကျပေါင်းလိုက်သောသို့မဟုတ်တင်းကျပ်စွာ tools များအပေါ်တောင်ပေါ် tapered ။ မေးရိုးအထူးတူးဖော်ခြင်းအပေါ်တင်းကျပ်စွာသည်းခံစိတ်များအတွက်အင်ဂျင်နီယာနေကြသည်။ စူပါလျှပ်စစ် grinders, ထွင်းထုစက်တွေ, တိစက်ခုံ & ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်သင့်လျော်သော။ မှတ်ချက်: 4mm-JT10...
မြင့်မားသောတိကျသံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck မြင့်မားသောတိကျပေါင်းလိုက်သောသို့မဟုတ်တင်းကျပ်စွာ tools များအပေါ်တောင်ပေါ် tapered ။ မေးရိုးအထူးတူးဖော်ခြင်းအပေါ်တင်းကျပ်စွာသည်းခံစိတ်များအတွက်အင်ဂျင်နီယာနေကြသည်။ စူပါလျှပ်စစ် grinders, ထွင်းထုစက်တွေ, တိစက်ခုံ & ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်သင့်လျော်သော။ မှတ်ချက်: 4mm-JT10...
High Quality 3/8 '' '- 24UNF စွန်ခံသံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck မြင့်မားသောတိကျပေါင်းလိုက်သောသို့မဟုတ်တင်းကျပ်စွာ tools များအပေါ်တောင်ပေါ် tapered ။ မေးရိုးအထူးတူးဖော်ခြင်းအပေါ်တင်းကျပ်စွာသည်းခံစိတ်များအတွက်အင်ဂျင်နီယာနေကြသည်။ စူပါလျှပ်စစ် grinders, ထွင်းထုစက်တွေ, တိစက်ခုံ &...
High Quality JT1 သံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck မြင့်မားသောတိကျပေါင်းလိုက်သောသို့မဟုတ်တင်းကျပ်စွာ tools များအပေါ်တောင်ပေါ် tapered ။ မေးရိုးအထူးတူးဖော်ခြင်းအပေါ်တင်းကျပ်စွာသည်းခံစိတ်များအတွက်အင်ဂျင်နီယာနေကြသည်။ စူပါလျှပ်စစ် grinders, ထွင်းထုစက်တွေ, တိစက်ခုံ & ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်သင့်လျော်သော။ မှတ်ချက်: 4mm-JT10...
highquality key ကိုရိုက်ထည့် stainlesssteel လေ့ကျင့်ခန်း Chuck အားသာချက်များ: 1. နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်: BENTENG အမှတ်တံဆိပ်ဟာတစ်ခုတည်းသောထုတ်လုပ်သူနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်သံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာသံမဏိ B10 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck 1. ပစ္စည်း: 3Cr13 2. taper တပ်ဆင်ထားသို့မဟုတ်ချည်တပ်ဆင်ထားသည်။ 1mm-16mm ကနေ 3. range ကမ်းလှမ်းမှုကို နောက်ထပ်ချိန်ခွင်လျှာမပါဘဲ 4. Max.10.000 RPM 0.03mm မှ 5. Precision လက်လှမ်းမမီ 0.02mm 6. သီးခြားလေ့ကျင့်ခန်း Chuck သို့မဟုတ်ဘက်ပေါင်းစုံစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း Chuck...
သံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck မြင့်မားသောတိကျပေါင်းလိုက်သောသို့မဟုတ်တင်းကျပ်စွာ tools များအပေါ်တောင်ပေါ် tapered ။ မေးရိုးအထူးတူးဖော်ခြင်းအပေါ်တင်းကျပ်စွာသည်းခံစိတ်များအတွက်အင်ဂျင်နီယာနေကြသည်။ စူပါလျှပ်စစ် grinders, ထွင်းထုစက်တွေ, တိစက်ခုံ & ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်သင့်လျော်သော။ Main...
လေ့ကျင့်ခန်း Chuck တင်းကျပ် 10 မီလီမီတာ 13mm Keyless လက် တောင်ပေါ်မှာ: 1 / 2-20UNF3/ 8-24UNF Precision: 0.35 လျှောက်လွှာ: AC အ & DC ကလျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်း၏သက်ရောက်မှုလျှပ်စစ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်မျိုးများအတွက်အကြံပြုထား .. အင်္ဂါရပ်များ: 1.High တိကျစွာပေါင်းလိုက်သောနှင့် tools...
တရုတ်နိုင်ငံ သံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ပေးသွင်း
သံမဏိ Spanner လေ့ကျင့်ခန်း Chuck အဆိုပါ collet တင်းကျပ်ဖို့ဘီးဆွဲအားဖြင့်ကဲ့သို့သောခုံတန်းလျားလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် Spanner လေ့ကျင့်ခန်း Chuck အဖြစ်, အဓိကအားဖြင့်စက် tool ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုတင်းကျပ်ဖို့ဘီးဆွဲထုတ်နှင့်ဘီးဆွဲနှင့်အတူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်လို, Key ကိုအတူ Chuck Drilling အင်အားသုံး clamping တစ်ခုဘီဗဲလ်ဂီယာ၏ extension ကိုလက်မောင်း, screwing ၏လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ, torque input ကိုတိုးမြှင့်အတွက်အခန်းကဏ္ဍနိုင်အောင်, ဒါ Chuck ကလစ်ကြီးလွန်းနေသည်။ ကြောင့် Chuck လိမ်ဖဲ့ခြင်းမှနျရိုးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏အားသာချက်များ, စိတျအပိုငျးအပြောင်းအလဲနဲ့ရန်လွယ်ကူများမှာရှိပြီးစျေးနှုန်းစျေးပေါ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်အားသာချက်များ, ဒါကြောင့်ကျယ်ပြန့်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုသည်နှင့်အညီ Chuck လိမ်ဖဲ့ခြင်း, အလင်းအလတ်စားနှင့်အကြီးစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ အလင်းနှင့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမိုးသည်းထန်စွာအလေးချိန်၏ဖွဲ့စည်းပုံ။ အလင်းကို Chuck ဝါယာကြိုးမိခင်အအေး extrusion တန်ဆာ, မြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအဘို့အမိုးသည်းထန်စွာ၏ဖွဲ့စည်းနေမှုကိုချေဖျက်သတ်မှတ်ထားသည်။ ပေါ့ပါး Spanner လေ့ကျင့်ခန်း Chuck အဓိကအား, DC နှင့် AC လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါအဘို့သင့်လျော်သောအိမ်ထောင်စု tool ကိုများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အလတ်စားနှင့်အကြီးစား Chuck အဓိကအားလက်သမားစက်, ခုံတန်းလျားလေ့ကျင့်ခန်း, စက်စင်တာများနှင့်အခြားဝန်ပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုသည်ကြီးမားသည်။ torque input ကိုများအတွက်အသုံးပြုသောဘီဗဲလ်ဂီယာပိုကြီး torque ကိုထမ်းနိုင်သည့်သံမဏိသွားများဖြစ်ကြသည်။
1.l ight တာဝန်သို့မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်။
2. taper တပ်ဆင်ထားသို့မဟုတ်ချည်တပ်ဆင်ထားသည်။
1mm-16mm ကနေ 3. range ကမ်းလှမ်းမှုကို
နောက်ထပ်ချိန်ခွင်လျှာမပါဘဲ 4. Max.10.000 RPM
0.03mm မှ 5. Precision လက်လှမ်းမမီ 0.02mm
6. သီးခြားလေ့ကျင့်ခန်း Chuck သို့မဟုတ်ဘက်ပေါင်းစုံစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
Key ကိုတိပ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
သံမဏိ Keytape လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
Spanner လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
Precision Key ကိုတိပ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
Key ကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck